Tag: kutengesa kutsvaga | Martech Zone
Tag: kutengesa kutsvaga
Sekureva kwe CSO Insights, makambani ane akura anotungamira chizvarwa uye maitiro e manejimendi ane 9.3% yepamusoro yekutengesa huwandu hwehuwandu hwehuwandu. Apa ndipo panotengeswa mapuratifomu ezvekushambadzira sevatsigiri vedu kuSalesvue vakave nemhedzisiro inoshamisa mukuvandudza zvese kushuma uye kugona kwezvikwata zvinoshandisa Salesforce - zvichipa tarisiro kune pipeline automation solution. Hazvisi zvekutengesa otomatiki izvo zviri kubatsira vamiririri vekutengesa kuti vawedzere kugadzira uye kushanda, hazvo. Kunyangwe iri kutengeswa kwemakore se
Pane muedzo neavo vedu vari inbound kushambadzira indasitiri kudzikisira kunze kwekushambadzira. Ndakatoverenga uko vamwe vashambadziri vari mukati vakati hapana chikonzero chekushambadzira kwekunze. Kutaura chokwadi, icho chigaro. Iri izano rinotyisa kune chero bhizinesi rinotarisa kuwedzera mumisika mitsva uye kubatana netarisiro dzavanoziva kuti dzichaita vatengi vakanaka. Kana iwe uine inozivikanwa brand (sevazhinji mabloggi uye vamiririri venhau venhau vanoita), zvingasadaro
Ndeipi Yakaenzana Webhu Peji Hupamhi?
Muvhuro, June 8, 2009 Chishanu, June 20, 2014 Douglas Karr
Kugadzira webhusaiti uye kumisikidza iyo peji rewebhu upamhi kusvika pahupamhi hupamhi hurukuro inofanirwa kuve nayo. Vazhinji venyu makaona kuti ini nguva pfupi yadarika ndachinja hupamhi hwebhurogu rangu dhizaini. Ini ndakasundira iyo upamhi hwepeji kunze kusvika gumi nemazana mapikiseli. Vamwe venyu vangangopokana nekutama uku - asi ini ndaida kugovera zvimwe zviga uye zvikonzero nei ndakasundira iwo upamhi hwedingindira zvakanyanya. 1048 pixels yanga isiri yakasarudzika